CryptoForecast စျေး - အွန်လိုင်း CFT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CryptoForecast (CFT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CryptoForecast (CFT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CryptoForecast ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CryptoForecast တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CryptoForecast များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoForecastCFT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0091CryptoForecastCFT သို့ ယူရိုEUR€0.00772CryptoForecastCFT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00697CryptoForecastCFT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00831CryptoForecastCFT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0822CryptoForecastCFT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0575CryptoForecastCFT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.203CryptoForecastCFT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0341CryptoForecastCFT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0122CryptoForecastCFT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0127CryptoForecastCFT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.204CryptoForecastCFT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0705CryptoForecastCFT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0495CryptoForecastCFT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.683CryptoForecastCFT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.54CryptoForecastCFT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0125CryptoForecastCFT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0138CryptoForecastCFT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.284CryptoForecastCFT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0634CryptoForecastCFT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.964CryptoForecastCFT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.82CryptoForecastCFT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.52CryptoForecastCFT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.671CryptoForecastCFT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.252
CryptoForecastCFT သို့ BitcoinBTC0.0000008 CryptoForecastCFT သို့ EthereumETH0.00002 CryptoForecastCFT သို့ LitecoinLTC0.000158 CryptoForecastCFT သို့ DigitalCashDASH0.00009 CryptoForecastCFT သို့ MoneroXMR0.0001 CryptoForecastCFT သို့ NxtNXT0.639 CryptoForecastCFT သို့ Ethereum ClassicETC0.00131 CryptoForecastCFT သို့ DogecoinDOGE2.6 CryptoForecastCFT သို့ ZCashZEC0.0001 CryptoForecastCFT သို့ BitsharesBTS0.35 CryptoForecastCFT သို့ DigiByteDGB0.312 CryptoForecastCFT သို့ RippleXRP0.031 CryptoForecastCFT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00031 CryptoForecastCFT သို့ PeerCoinPPC0.0307 CryptoForecastCFT သို့ CraigsCoinCRAIG4.11 CryptoForecastCFT သို့ BitstakeXBS0.384 CryptoForecastCFT သို့ PayCoinXPY0.157 CryptoForecastCFT သို့ ProsperCoinPRC1.13 CryptoForecastCFT သို့ YbCoinYBC0.000005 CryptoForecastCFT သို့ DarkKushDANK2.89 CryptoForecastCFT သို့ GiveCoinGIVE19.5 CryptoForecastCFT သို့ KoboCoinKOBO2.02 CryptoForecastCFT သို့ DarkTokenDT0.00838 CryptoForecastCFT သို့ CETUS CoinCETI26
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:55:02 +0000.